The Black Shark 2 Pro ga-oru oru na Europe anya | Gam akporosis
Black Shark 2 Pro ga-adị maka ịzụta n'oge na-adịghị anya na Europe
Black Shark 2 Pro bụ ekwentị egwuregwu kachasị ọhụrụ na nso nke Xiaomi, gosipụtara n'ihu ọha n'oge ọkọchị a. Ahịa ndị China bụ otu n'ime ọrụ kachasị na ahịa a. Ọ bụ ihe nlereanya na-ewepụta mmasị na ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma na mpaghara a nke igwe egwu egwu, nke ọ na-ere ahịa nke ọma na China.
Ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe a maara banyere mmalite nke ihe nlereanya a na Europe. N'ezie, ejighị m n'aka na Black Shark 2 Pro a ga-ebupụta na Europe. Ugbu a anyị nwere nkwenye na nke a, nke ọ dịkarịa ala na-enwu ntakịrị ìhè na mmalite ya.
Xiaomo Black Shark 2 Pro a ga-arụ ọrụ n'oge na-adịghị anya na Europe. E gosiputala na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ, ka anyị nwee ike ikwenye na mwepụta a. Agbanyeghị na ruo ugbu a ọ nweghị ihe amatara gbasara ụbọchị mwepụta enwere ike. Enweghị data ọ bụla na ọnụahịa ọ ga-enwe.
Ekwentị ga-oru na atọ dị iche iche na agba na Europe. Agba ndị a họọrọ site na ika bụ Onyunyo Black, Iceberg Grey na Gulf Blue. Nke ikpeazụ a ga - abụ na mbipụta a kpaara ókè, yabụ n'ezie enwere ọtụtụ ndị nwere mmasị na ya. Ọzọkwa, ha niile na-eji ngwa ekwentị abịa, dị ka egwuregwu ya n'akụkụ aka ekpe wee kwụrụ ọtọ.
Obi abụọ adịghị ya, a na-akpọ Black Shark 2 Pro ka ọ bụrụ otu n'ime ụdị ndị kachasị ewu ewu n'ọhịa nke igwu egwu igwe. Chinesedị ndị China nwere ụdị dịgasị iche iche na mpaghara a, ọ bụ ezie na ọtụtụ ụdị ya eruteghị Europe. Luckily ọ ga-agbanwe na ekwentị a.
Anyị ga-ege ntị na akụkọ na mwepụta nke a Chinese ika gaminggba Cha Cha ekwentị Anyị agaghị echere ogologo oge iji nwepụta ụbọchị mwepụta na ọnụahịa ekwentị a ga-enweta na mbata ya na Europe. Ọ bụ ezie na n’echiche a, anyị na-eche ka ụlọ ọrụ nyere anyị nkọwa ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Black Shark 2 Pro ga-adị maka ịzụta n'oge na-adịghị anya na Europe
Egwu Instagram rutere n'ọtụtụ mba Latin America: anyị na-akọwa otu esi eji ya eme ihe
LG Style 5 dị ugbu a na ahịa US